प्रदेश २ – Page3– Rajdhani Daily
प्रदेश २ को नाम के हुने ? यस्तो हुँदैछ बहस
जनकपुरधाम । प्रदेश दुईको प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर बहस भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा ह...
प्रहरीकै मिलेमतोमा मरिच तस्करी, २ दिनमै ७८ बोरा मरिच बरामद
महोत्तरी । भारतीय सीमावर्ती मटिहानी बजारबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा मरिच बरामद गरेको छ  । प्रहरीले मटिहानी नगरपालिका-७ स्थित महेशप्रसाद साहको किराना पसलबाट ४ सय ५० किलोग्राम मरिच नियन्त्रणमा लिएको हो ।...
सर्लाहीमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा परी ३ जना घाइते
सर्लाही । सर्लाहीमा छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परी ३ जना घाईते भएका छन । ईश्वरपुर र बलरा नगरपालिकामा गए साझ दुर्घटना हुँदा ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ९ रामनगर भित्रीसडक खण्डमा बयलवासबाट रामनगर तर्फ जाँद...
ऊर्जा दक्षतामा लगानी गर्न त्रिपक्षीय छलफल
वीरगन्ज । नेपाली उद्योगमा ऊर्जा खपत कम गर्न ऊर्जा दक्षतामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । जर्मन विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघबीच ऊर्जा दक्षतामा...
महिलालाई गोटी बनाएर सार्वजनिक मुद्दा
लहान । समान्य विवादमा सार्वजनिक मुद्दामामला गरेको पछि कल्याणपुर ५ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र यादव आपत्ती जनाएको छ । विद्यार्थी भर्ना विषयमा कल्याणपुर ६ मा स्थानीय श्रीचन साह (ललियावाला)ले मदिरा सेव...
उखु किसानको अनशनमा नगरप्रमुखको सहभागिता
सर्लाही । सर्लाहीमा उखु किसानले आइतबारदेखि मलंगवामा सुरु गरेको रिले अनशनमा नगरप्रमुखले पनि सहभागिता जनाएका छन् । उखु किसानसँगै बलरा नगरपालिकाका प्रमुख अभयकुमार सिंह, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राज...
विधेयक बिरूद्द डाँको छाडेर रोए मोरङका पत्रकार
मोरङ । मोरङका पत्रकारहरूले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याएको विधेयकको रोएर बिरोध गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भेला भएका पत्रकारहरूले संसदमा पेश गरेको विधेयक हुबहु पारीत...
युवतिको विषयमा झगडा हुँदा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या
धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ मारेककटहरेमा गएराती छुरा प्रहार गरी एक युवकको हत्या भएको छ । बैशाख शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा मारेककटहरे स्थित माझगाउँमा लागेको मेलामा गएका महालक्ष्मी–३ डाँडागाउँ...
बलात्कृत युवतीमा पीडा : जेलवाटै धम्कि दिन्छन् ‘छुटेपछि मारिदिन्छु’
सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित माईपोखरीकी १७ वर्षीया युवती एक वर्ष अघि आफ्नै छिमेकी समुन राईबाट बलात्कृत भइन् । बिहान घरबाट हिँडेकी ती युवतीलाई सुमनले जङ्गलमा र्पुयाएर बलात्कार गरे । सुमनले आफूसँग यौन सम्पर...